Nirefotra ny basy teny Anatihazo Isotry: jiolahy iray maty voatifitra, telo azo sambo-belona | NewsMada
Nirefotra ny basy teny Anatihazo Isotry: jiolahy iray maty voatifitra, telo azo sambo-belona
Par Taratra sur 08/05/2019
Taitra vao maraina ny mponina eny Anatihazo Isotry sy ny manodidina, omaly raha nandre ny poa-basy nandritra ny fanenjehana andian-jiolahy nataon’ny polisin’ny UIR. Vokany, jiolahy iray lavon’ny polisy raha azo sambo-belona kosa ny namany telo lahy…
Maty rotiky ny balan’ny polisin’ny UIR teny Anatihazo Isotry, omaly tamin’ny 6 ora sy 30 mn maraina, ny jiolahy iray raindahiny amin’ny fanendahana sy ny fanaovana herisetra. Raha ny fampitam-baovao nampitain’ny polisy, efa ho roa herinandro izay ny nanao “Operation en tenue civile” amin’ny faritra mahamay rehetra eto an-dRenivohitra ny polisin’ny UIR hanenjehana ireo mpanendaka sy ny mpanao herisetra. Nahitam-bokany, ny asabotsy 4 mey 2019 lasa teo, izany satria lavon’ny polisin’ny UIR tao ambadiky ny Fop 67 ha ny jiolahy iray. Omaly indray, andian-jiolahy miisa efatra indray no nifanehatra tamin’ny polisy. Efa manana angom-baovao marim-pototra ny polisin’ny UIR momba ireto mpanendaka eny amin’iny faritra Andavamamba (Cenam) sy ny manodidina iny ary efa miandry azy ireo. Nametraka vela-pandrika ireto jiolahy ireto ny polisy ka raikitra ny fifandonana.
Nidoboka am-ponja ireo telo lahy…
Nandositra avy hatrany raha vao nahita ny polisy nanatona ireto jiolahy efatra ireto teny Andavamamba (Cenam) izay saika hanendaka olona iray. Raikitra ny fifanenjehana hatrany Anatihazo Isotry. Vokany, voasambotry ny polisy ny telo amin’izy ireo raha tsy nanaiky hosamborina kosa ny iray fa niridana nitsoaka ihany na efa nampijanona azy aza ny polisy, araka ny fanazavan’izy ireo. Tsy nanaiky mora foana anefa fa nanohy ny fitsoahany ihany ka nitifitra avy hatrany ny polisy. Maty tsy tra-drano ity jiolahy ity. Naterin’ny polisy eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA ny fatin’ity jiolahy ity raha natolotra ny fampanoavana ka naiditra vonjimaika am-ponja kosa ireto telo lahy namany azo sambo-belona. Nahitam-bokany ny ezaka vitan’ny polisy tamin’ny nahalavoana jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana. Faritra isan’ny mampitaraina matetika ny olona hatrany, indrindra ireo mandeha amin’ny harivariva sy vao maraina, iny faritra Andavamamba (Cenam) iny. mitondra faisana izay tratran-dry zalahy, na ireo mandeha an-tongotra na ireo mandeha fiara anaty fitohanan’ny fifamoivoizana hatrany amin’ny tetezan’Ampasika sy ny mivoaka mandalo amin’ny Aigle Noire Isotry.